Halatra vola tao amin’ny PM : Nipoitra ny marina, lainga no naelin’ireo mpanohitra -
AccueilSongandinaHalatra vola tao amin’ny PM : Nipoitra ny marina, lainga no naelin’ireo mpanohitra
03/05/2018 admintriatra Songandina 0
Na dia niniana naely tetsy sy teroa aza ny lainga marivo tototra sy noforonin’ireo mpanohitra mahakasika ilay vola very tao amin’ny praiminisitra, nivoaka ihany ny marina. Tsy misy afa-tsy lainga nentina nanakorontanana saim-bahoaka, ary novoizina hatrany mantsy fa vola mitentina 12 miliara Ar no very sy nisy nangalatra tao amin’ny trano fonenan’ny praiminisitra Mahafaly Solonandrasana Olivier, kanefa 800 tapitrisa Ariary no very araka ny tatitry ny zandary. Fonds Spéciaux izay fampiasa sy tazomin’ny lehiben’ny andrim-panjakana amin’ny hamehana sy amin’ny asa maika. Izay efa nitazona ny toeran’ny Praiminisitra dia mahafantatra tsara izany sy ny fampiasana izany.
Noho izany indrindra, nivaly ny fanadihadiana sy ny fikarohana nataon’ny zandarimariam-pirenena ka olona enina (06) no nadoboka am-ponja avy hatrany. Ny roa (02) tamin’izy ireo nalefa eny amin’ny Fonjan’i Tsiafahy ary ny efatra (04) kosa eny amin’ny Fonjan’Antanimora. Raha ny tatitra hatrany, tany Manambolosy, distrikan’i Mananara Avaratra, Antalaha, sy teto Antananarivo no nisamborana ireo olona voampanga ireo. Tafiditra tamin’ity raharaha ity ny mpiambina ny praiminisitra sy ny vadiny.